NextMping | Nguva Yemberi Inogoverwa
Idzva Idzva Pepa
Ona zvose White Papers
Nguva Yemberi Inogoverwa
Jason Campbell weMindValley anobvunzana naCheryl Cran pane 'kuzvitungamira' kunodiwa kuti vagadzire ramangwana rakagoverwa.
Kuti uterere kune yakazara audio yeichi interview enda pano.
Jason: Ini ndine Cheryl Cran pano, iyo, Ah shamwari yangu, tichava nechirwere chakadaro kutaura nezve ramangwana rebasa uye kuti ramangwana rakagoverwa. Ndinoreva kuti akazivikanwa semushambadzi weOtalytica. Kana zvasvika pakutaura nezvenyaya iyi, ramangwana rebasa rinotaridzika sei? Iye anga ari mutungamiri ari kutaura mumasangano pasi rese. Akanyora mabhuku masere here neanepfumbamwe anouya uye zvatichazotaura nezvakawanda izvozvi ndizvo chaizvo zviri kuitika, ndedzipi shanduko idzi dzatiri kuona pabasa izvozvi? Ko iro ramangwana rinotaridzika sei uye chii chatingaite nezvazvo kuti tirambe tichinyanya kugadzira zvigadzirwa uye kuramba tichiita zvinoshamisa pesvedzero. Cheryl, ndinokutenda zvikuru nekuve pachiratidziro uye nekugamuchirwa.
Jason: Ini ndaida kunzwa kuti yaive rwendo rwako rwekupinda muiyi niche yekubatsira vanhu kuti vapfuure nekuchinja uye wakakwanisa sei kufamba mumunda uyo uye kunyatsobatsira makambani kunzwisisa zvinoda kuitwa?
Cheryl: Saka rwendo rwangu rwunoringana zvishoma mune izvo kuti handina kuenda kuyunivhesiti kana kukoreji. Izvo zvakanyanya kwazvo maitiro azvino!
Ndakatanga basa rangu chairo kubva chikoro chesekondari uye ini ndakaenda kubhengi. Ini ndaive ndanyatso kubudirira-ndakatungamira. Ndakadzidziswa kushanda nesimba, ita nesimba uye ndakasimudzirwa pachinzvimbo chehutungamiriri mudiki kwazvo, makore makumi maviri nematatu.
Maitiro angu akasiyana semutungamiri aive ekuisa chiono uye kukurudzira uye kukurudzira vanhu kuti vauye pamwe neshanduko. Ndiwo waive wiring yangu kubva pakutanga chaipo uye ini ndakatora hunyanzvi ihwohwo nzira yese kusvika ndabuda mubhangi ndikaenda ndikanozvomora musoro ndokuenda kunishuwarenzi, ndakasimudza musoro unobudirira inshuwarheni ruoko, vakaita hunyanzvi hwakawanda kutaura kune vanogadzira uye vatengesi nemamwe mapoka. Saka kutaura hunyanzvi kwaigara kuri chikamu chebasa rangu rekudzidzira tsika futi.
Ndakanyora bhuku rangu rekutanga, “Taura Zvaunoreva - Taura Zvaunotaura"Muna 2001 uye iro bhuku raive rose pamusoro pekuita kwedu ramangwana risingazive uye chii kutaudzana kwatinoda kuti tiite izvozvo."
Uyezve mabhuku masere gare gare, uye ndanga ndiri mukuita zvakavanzika nekambani yedu yekubvunza kweanopfuura makore makumi maviri. Ndakanyora bhuku racho "InoteveraMapa - Fungidzira, Famba uye Gadzira Iyo Ramangwana Rebasa" makore maviri apfuura uye izvi zvisati zvaitika "Unyanzvi hweKuchinja Hutungamiri- Ku driver Shanduko Mune Nyika Inokurumidza Kufamba". Kugona kwangu pachangu kuve akanyanya kugadzikana mukushanduka-shanduka chimwe chinhu chandakakwanisa kuendesa kune vatengi vatinoshanda navo muzvirongwa zvinoshanda asiwo muchikwata chedu uye nevanhu vatinodzidzisa nekubvunzana navo zvakare.
Jason: Shanduko dziri kufamba nekukurumidza nekukurumidza here? Tekinoroji iri kuchinja mashandiro atinoita here? Nei shanduko yakaoma?
Cheryl: Zvakanaka, ini ndinofunga semubatanidzwa wezvose zviri pamusoro. Peter Diamandis, mubatsiri wechibvumirano cheyunivhesiti imwe chete anotaura nezve exponential shanduko uye nekukurumidza kukurumidza kwekuchinja. Uye ndizvo zvatiri kurarama izvozvi. Saka tanga tichitaura nezve shanduko kwemakumi emakore, asi kusvika kusvikira zviuru zviviri shanduko yacho yaigona kubata. Semuenzaniso, ngatitaurei nezveMishini yeATM. Shanduko iyi yaive nyore shanduko iyo munhu wese akajairazve, nekukurumidza zvikuru. Asi ipapo kana iwe uine iwo zviuru zviviri uye ikozvino iwe uine exponential innovation inoitika pamwedzi unoenderana neiyi yakabatana kune mbiri tekinoroji shanduko pamwe nemagariro shanduko. Pfungwa dzevanhu dzinovhura kune zvakasiyana siyana zvinhu zvakasiyana. Societaly ndinoreva kuti tava kutaura pachena pamusoro pezvinhu zvingadai zvisati zvambokurukurwa makore gumi apfuura uye tichinyatsotarisa mafambiro atinoita nyika kuburikidza nekuchinja. Asi iwe unotaura chokwadi, kuchinja kwepfungwa ndicho chinhu chakanyanya kuoma kuita vanhu. Isu tiri kusimuka kubva kune 'ini kuenda isu' mindset iyo inofanirwa kugadzira ramangwana rinogoverwa.
Tekinoroji iri nyore nyore. Iwe unotaura nezve CRM uye mapuratifomu, icho chikamu chiri nyore. Iwe unogona kuti, zvakanaka, dambudziko iri rinogona kugadziriswa nehunyanzvi. Ndivanhu vari kunetseka.
Isu tinorerutsa kukosha kwekuita kuti vanhu vatenge mune ramangwana kuti vaone kukosha kweshanduko, kubatanidza shanduko kune yavo pachavo uye kubatanidza shanduko kune izvo kukanganisa kuchave kuri pavari. Ini pachangu. Ini ndakasimba uye ndakasimba uye nechido ndinotenda kuti kana tisina shandura maitiro ehutungamiri kune tekinoroji nyowani, isu ticharamba tichiwana kushinha kubva kune vanhu nekuti vepfungwa havavimbi shanduko kunze kwekunge taigona kuibatanidza kune zvinoreva uye ini ndinofunga ndiyo mharadzano yatiri iko izvozvi.
Jason: Wow. Ndinoda kunyatsoongorora kuti zvakatowanda nekuti ini ndinojaira nguva dzandakamboedza kushinha tekinoroji nyowani mukati mekambani uye ndaona kupokana kwandinoita nemunhu wese uye nezvakawanda zvaunotaura kana iwe taura nezve kufungidzira kuti ramangwana rebasa iri chinhu chehunhu hwevanhu. Iwe unorevei nezve iyi pfungwa yezvirevo? Ini ndinonzwa kunge yakawanda nguva vanhu vakangwara, uye nyangwe ini pachangu, ndinofungidzira kuti shanduko kana hunyanzvi kana chero chiri kuuya chiri kunyatsoita kuti hupenyu hwangu huve nyore. Apa ndipo here pane pari kuitika nzvimbo?
Cheryl: Mubhuku rangu, “Hunyanzvi Hwekuchinja Hutungamiri”, Ini ndinotaura nezve kutenderera kwekuchinja uye nemabatiro atinoita tese nekuchinja chaizvo. Izvo hazvina basa kuti rakavapo sei chero isu tiri, kana shanduko ikaitika, pane yekutanga pushback reaction, mhinduro yekudzivirira, uye iko maitiro hausi kuvimba neshanduko. Handina chokwadi chekuti zvichave zvirinani pane kuti zvakafamba sei uye handina chokwadi chekuti ndichakwanisa kuendesa kune kwandinofanira kuiisa kuitira kuti ndive nehunyanzvi. Chikamu icho chikamu chinodiwa. Chaizvoizvo chikamu chinonetsa chekufunga. Nekudaro vanhu vazhinji vanonamira muchikamu ichocho nekuti vanokanganiswa mune izvo zvisiri kushanda kana kuti zvichatadza sei? Saka ivo vari kuda kutora zvigunwe nemakomba paiyo tekinoroji nekusimudzira ramangwana parutivi kuenda kune chinotevera chikamu, icho chandinodaidza kugadzira gadziriso, kwaunotanga kutarisa, zvakanaka, chii kana, kana ndanga ndichikuperekedza iwe Jason uye shandura, pane kuuya kwauri uye uwane vese kufara uye uti tichachinja, isu tava neCRM nyowani iyi, inotyisa.
Zvinozoita kuti zvinhu zvese zvive nyore kwazvo kwauri. Kuita kwako kwekutanga kuchave kusagadzikana. Iwe unozofunga kuti ndiri kukutengesa iwe mutoro wakakura wese wewe unoziva chii? Iwe hausi kuzondivimba kana tekinoroji nekuti ndiri kuedza kukutengesa kwauri. Uye saka ini pandinotaura nezve zvinoreva, ndezvekubatanidza iyo kune izvo zvinoreva kuna Jason nebasa rake. Kuti uitarise kuburikidza ne lens iyo ramangwana rakagoverwa. Saka pachinzvimbo, kana ndikauya kwauri ndobva ndati, tanga tichiongorora maCRM mazhinji, isu tinoda chaizvo kuisirwa kwako pavari. Iwe unotiudza kuti zvichafamba sei musiyano pabasa rako rezuva nezuva? Ndeipi mibvunzo inouya kwauri iwe paunoona aya anogona kunge ari tekinoroji uye chii chaunofungidzira chichiita kuti basa rako muhupenyu rive nyore kana iwe uchizoshandisa chero eaya matsva CRM zvirongwa? PaNeMMping tinotaura nezve PREDICT modhi. Uye chimwe chezvinhu zvakakosha zvekuita kuti shanduko iyi ishande. Uye ini handisi kutaura nezve kungoenzverwa kwevashandi kunoitwa kana kuongororwa kwevatengi, ndiri kutaura pamusoro peimwe kusvika kune imwe anecdotal zvine musoro kutaurirana nevanhu, nevanhu, kutaura kwevanhu kuchivanhu, izvi zvinoreva chii kwauri? Ungaona sei ichishanda uye isu tingaite sei nekuruka tichifunga nzira dzekusimudza izvi kuitira kuti zvinoshanda kwauri uye kune wese munhu wepamusoro soro zvinokwanisika.
Jason: Cheryl, isu tinofanira kunge takambove nekukurukurirana nenzira yapfuura mune rangu basa! Zvino zvawava kutaura izvi, ndiri kufunga nguva dzese idzi ini ndairova chigubhu kuita chaizvo izvo uye nekuramba kwakawanda sei, ndoda kurwa hondo yekukwira pandakanga ndichiedza kuunza zvigadzirwa izvi, zvishandiso izvi nekuti Ndakafara nazvo. Uye fungidzira chii? Ini ndinozivikanwa semutengesi wekutengesa pane pfungwa Valley uye saka munhu wese anogara achiuya nemweya wekusagadzikana.
Saka ndinoda kuwedzera zvishoma padiki pane ino PREDICT modhi kutibvumidza kuve nani pakuunza zvigadzirwa uye matekinoroji nyowani uye kungova nekunyatso gadzira basa. Uye zvakawanda zvezvinhu izvi zvakatenderedza AI, isu tichazotaura zvishoma gare gare, asi kutanga, ngatimborei iyi PREDICT modhi kutibatsira isu kunze kana kungondibatsira kunze panguva ino.
Cheryl: The kufanoona mhando chishandiso chekubatsira kufungidzira ramangwana uye chekutanga tinotsvaga mapateni, ayo ari P weiyo PREDICT modhi. Iyo mhando ine zvinhu zvinomwe. Ini ndichataura nezve chete yekutanga chikonzero isu chaicho tinogona kuita pod-awa maviri podcast pane yePREDICT yemhando chete. Isu tichazongotaura nezve P uye iyo R, iyo P ndeye mapatani.
Iyo maR yekuzivikanwa. Kana isu pachedu sevaridzi vebhizinesi kana chero munhu achiteerera semunhu, kana iwe uchida kubata ramangwana, iwe unofanirwa kutarisa mapatani, iwe unofanirwa kutarisa maitiro kubva pane akasiyana maitiro. Imwe yeramangwana reunyanzvi hwebasa iro isu tese tinoda kuvandudza pane yakakwira kugona kuve nemafungiro akawanda.
Saka iwe uri kutarisa kwese kuwanda maonero uye wobva watarisa pamapatani akabuda pane iwo ese maitiro. Saka semuenzaniso, kana taizotarisa kune kambani iri kutengesa kwazvo inotyairwa, zviri pachena kuti taizounganidza iyo data kubva kune iwo maonero ekutengesa, asi isu taizotsvaga iyo mapatani ayo anobatana nemashandiro, accounting, uye vatengi. Ndipo ndipo panogara goridhe nekuti ndizvo zvinotinongedza remangwana nekuti ikozvino tinogona kuenda, Omirira chechipiri. Saka kutengesa kuri kuti vanhu vanoda kuita zvakanyanya kuzvishandira. Online mabasa ari kuti isu hatina tekinoroji yekubvumidza vanhu kuti vazvishandire kune imwe nhanho iyo vatengesi vanoti tinoda uye accounting ichiti inoda mari yakawanda kuti iite izvozvo. Saka chero iwo mafungiro akadii, tinovaunza vese pamwe uye tinowana iwo akajairwa kuburikidza nekuzivikanwa maitiro. Uye izvo zvakajairika nzvimbo zvingave isu tinogona kuchengetedza mari yekubvunzurudza kana tikashandisa izvi neimwe nzira, tinogona kubatsira kushambadzira kuita basa riri nani nekuti ikozvino tonyatsoziva izvo mutengi anoda zvekuzvishandira. Tinogona kubatsira mashandiro kusarudza iro tekinoroji mhinduro yakapihwa iwo mapateni ayo isu takaziva.
Jason: Ini ndoda kutaura nezvezve mamwe maitiro iwaya atiri kuona. Ngatitangei neetekinoroji yekumberi nekuti ini ndinofunga kuti tekinoroji chinhu chakanakidza vanhu kuti vade kuita maoko avo. Saka ndedzipi idzi maitiro makuru? Wataura uchakavhura zveshuwa. Takataura zvakawanda uye pachena kuti ndiri mumashure ekutengesa, ndakafadzwa paunotaura nezvemasisitimu uye CRM. Ndezvipi zvinhu zvikuru izvi zvatiri kuda kuona izvo zvinogona kutikanganisa isu pachedu pabasa?
Cheryl: Ndiri kufara kuti isu takatanga kubvunzurudza tichitaura nezve vanhu kutanga nekuti paNextMapping ndiyo kiyi pano ndiyo yatinofanira kutarisa, zviri pachena, isu tese tinofara nezvehunyanzvi nekuti hunokanganisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tiri kushandisa Siri ne Alexa, tese tiri kushandisa izwi activation, tese tiri kushandisa touch technology. Isu tese tiri kushandisa kumeso kuziva, saka isu tinoshamiswa, asi ini ndinonzwa moyo wangu kuti tinofanirwa kutarisa tekinoroji nevanhu rekutanga lens. Isu tinofanirwa kutanga nemibvunzo yakaita seiyi:
Izvo zviri kukanganisa sei ruzivo rwevatengi? Izvo zviri kukanganisa sei ruzivo rwevashandi? Izvo zviri kubatsira sei vanhu vese? Uye ini ndinofunga kana isu tiine iyo mibvunzo kumberi, saka tichava takagwinya nezvesekuita tekinoroji yatiri kutarisana nayo. Inowanikwa kurodha pawebhusaiti yedu inonzi yepamusoro 20 maitiro e2020
Tiri kuona dzinoverengeka zvinhu. Nhamba yekutanga, kubatanidzwa kwevashanu G mashanu G achazove ebiquitous uye zvinoreva kuti ikozvino tichava nekunyanyisa kugamuchirwa kwenzwi rekushanda, rekuzivikanwa kumeso. Pane ese matekinoroji aya isu tave kungotanga kuve pazviri. Iyo pindo yeAI ichaenda kuenderera nekuwedzera nekuchinja zvinhu zvenguva yemberi uye kuwedzera chokwadi chekuti ramangwana rakagovaniswa. AI ichaenda kuenderera mberi nekuchinja maitiro atinoita bhizinesi, saka haisi kuzotora mabasa. Izvo zvinotora pane mabasa anoitwa nevanhu pane anodzokorora nhanho. Saka kana tikatarisa kuenderera mberi kweAI maitiro, mamwe maitiro atiri kuona ndeyekushomeka, masangano emarobhoti akaremerwa mukugadzira, makobhu akawanda, kutarisirwa kwakawanda muindasitiri yekuchengetedza hutano, maexoskeletons akawanda kubatsira vanhu kusimudza zvinhu panguva dzegumi simba. yechirume. Pane zvakawanda zvakagadzirwa. Muchokwadi, ini ndinonzwa kufara pamusoro pazvo, isu tiri chaizvo parutivi rwezvizhinji zvezvirwere zveazvino zvevanhu zvinogadziriswa mumakore mashoma anotevera kuburikidza nehunyanzvi. Isu tiri kumucheto kwekugadzirisa zvinhu sekurwara kwepfungwa kuburikidza necuffitive VR kurapwa. Virtual chaiyo kurapwa inguva inonakidza kudaro yekuve vapenyu saka matekinoroji aya ari kuzoshandura nyika.
Tine vanhu mabhiriyoni masere pasi pano. Hafu yavo yakabatana neWIFI. Parizvino mumakore matatu anotevera, 8% yepasi pano ichave nehukwanisi kuWIFI. Saka kana iwe uchifunga isu tave nehurongwa hwekuvandudza ikozvino wedzera izvo ne75% yehuwandu. Iye zvino kuwedzera kune kuvhura sosi, kuwedzera kune dhijitari, kuwedzera kuhuchenjeri hwakaunganidzwa hwatinounganidza kuburikidza nehunyanzvi. Iwe unogona kana kuva nemifungo miviri nezveramangwana.
Iyo yekutanga maitiro ndeyekutya zvikuru. Kana nhamba yechipiri, iwe unowana mufaro wakanyanya uye wakanyanya uye unotarisa mikana yekuti tinogona sei kushandura nyika. Uye handitauri izvi nemaonero akanaka. Ini ndoti inyaya chaiyo kuti tisike nyika. Ivo vari kugadzirisa matambudziko ezvakatipoteredza. Iwe unoziva, isu tine Greta Thunberg achitaura nezvenharaunda. Pane mhinduro. Pane zvigadzirwa izvozvi izvo zvaive zvakagadzirwa izvo nekudonha kweyemvura, mapurasitiki anogona kuunzwa pasi pegumi chegumi chekutanga kwawo. Kune hunyanzvi hwakawanda zvekuti tinonzwa zvese zvakaipa munhau. Isu hatisi kunzwa nezve iyo itsva ichaita yakawanda matambudziko edu azvino, chinhu chechinyakare saka inguva inonakidza kwazvo kuve mupenyu.
Jason: Cheryl, ndinoda kuti wakakwanisa kugovana zvishoma nezvepfungwa yezviri kuuya. Izvo zvinonakidza uye ndinoda maitiro akanaka auri nezvako, ini ndinoda chaizvo kuti vanhu vanzwe vakasununguka vachiziva kuti ramangwana iri rinouya uye zvinorevei kwavari uye basa ravo nekuti pane zano iri senge kukosha kwangu, senge, wow, kuchinja kwese kuri kuitika. Ndeipi chikamu chandinoita? Ini ndinogara sei ndakakodzera mune ino gungwa rekuchinja? Sezvineiwo nenyaya yangu, ini ndiri kutotambudzika nezvinhu zvakapetana senge kugadzirwa muhunyanzvi hwokugadzira michina, asi zvawangotaura nezvazvo inzira inopfuura izvo vanhu vazhinji vanogona kuita kuti pfungwa dzavo dzitendeke. Saka isu tinopinda sei mukuwanda uku uye tinotamba sei chikamu chedu?
Cheryl: Apa ndipo apo kutenda kwangu muvanhu kwakanyanya kukwirira. Ndine kutenda kwakanyanya kuti tiri kuzogadzirisa matambudziko mazhinji. Sezvandakambotaura, kune yakawanda mibvunzo ini bvunza mubhuku rebasa "NextMping" zvakatenderedza, une anotya mindset kana iwe une yakawanda pfungwaset nezveramangwana? Asi ini ndinofunga kubva zvakanyanya, chii chinotevera maonero, chiri kunyatsotarisa kuti uripi ikozvino. Saka kana iwe uri kunzwa kutya tekinoroji semuenzaniso, kana urikusatya kutya nzira iyo nzanga iri kupinda mairi, ndinofunga iwo mukana uripo wekuti isu tishanduke kubva kumucheto kwayo chaiko. Ndinotenda tiri pamukana wekushanduka-shanduka pano saka kana iwe uchitarisa shanduko, iwe unogona kuzvitarisa sezvo ndichitya, handizive zvazvinoreva. Kana iwe unogona kutarisa seanonakidza uye kuti ramangwana riripo. vakagovana.
Zvakanaka kuenda ikoko. Ndiko kwekutanga kwekuchinja iko kuziva kwekuti ndinotya uye handizive zvazvinoreva, asi chinhanho chechipiri chiri kubvuma izvozvo uyezve ndokuti, chii chandingaite kuti ndishandure pfungwa? Semuenzaniso, kana nzanga ichienda kunharaunda yakasarudzika-inobatanidza vanhu vese tinobva tave nemukana wekuti: sei musingadaro?
Ndanga ndakabatirira kuchigaro chemasimba here? Isvo ego yangu iri kundibata nekutenda kuti chero ndichibata simba, ndiri kukunda?
Ramangwana rakagoverwa, ramangwana rakabatana, ramangwana rakabatanidzwa. Uye nzira chete yekuve yakagadzirira ramangwana racho ndeye kutarisa shanduko sechiratidzo kwatiri kuti tishanduke. Uye pane zvakadzama zvakadzika ipapo sezvaunoziva paMindValk chikonzero chikonzero ndizvo zvauri zvese. Pane zvakadzika zvakadzika ipapo nezve chero nguva shanduko inoitika kana chero nguva kukanganisika kunoitika, iko kushevedza kwedu, mukana wekuti isu tiende, ndingatarisa sei iyi yekusika?
Ndingaite sei kuti ndigadzirise mafungiro angu kuti ndisiri kusundira kumashure ndichipesana neshanduko iyi, asi ndiri kunyatso kuona izvo zvinogona kushanduka?
Uye zvakare, ndichitaura nezvangu zviwanikwa, iwe unoziva, "Hutano hweKutungamira Hutungamiriri" ndinotaura pamusoro pazvo. Tinoita sei izvozvo shanduko kune izvo zvinotevera?
Uye paNextMping tinopa iwo mhando dzekubatsira vanhu kuti vachinje.
Jason: Chimwe chinhu chandinofunga kuti isu tese tinoshuvira asi zviri pachena, dzimwe nguva tinosangana neyeedu erufu kufa mhando dzehondo idzo isu tinofanirwa kupfuura mairi uye ini ndinoda nzira yakawanda yebasa uye izvo zvinhu zvaunotaura nezvetekinoroji zvakanaka asi sekutaura kwako iwe ihwohwo hunhu hwedu hwevanhu kuchinjika nahwo uye ini ndanga ndichida kuona kuti dai taive nemamwe maturusi atinogona kupa chero munhu ari kuteerera, uyo ari munzvimbo yekutungamira uye anogona kunge achibata nevanhu vari muchikwata chavo vane chaizvo izvi marudzi ezvimiro zvisina kunaka zvemafungiro uye kuti unonyatsozviita sei kuti dzive dzakagadzirira shanduko pabasa. Kunyanya kana zvasvika kune zvinhu zvingatoguma nekupedza kudiwa kweiyo nzvimbo dzebasa munzvimbo yakadaro. Zvinoita sekunge chinhu chakaoma kufamba. Chii chawakaona kana chauri kutarisira?
Cheryl: Ndakashanda neboka rezvehutano muUS uye ivo vaipfuura nekugadzirisa kwakakura. Saka dzaive dziri kutengwa nechimwe chibvumirano, zvaireva anenge gumi evatungamiriri mukamuri re10 iro randaifambisa raive rekuzodzoreredzwa. Pakanga pasina basa rakavimbiswa kwavari. Pakanga pasina yakanyatsotsanangurwa ramangwana kana yebasa nzira kana chirongwa chekutevera kwavo.
Zvino, kumunhu chero upi zvake ari kuteerera, nhau dzakanaka dziriko nhasi, chero munhu akagadziriswa kuwaniswa mukana mukana nekuti kuchave nekushomeka kwevashandi 85 miriyoni vanhu muNorth America nzira yose kusvika gore ra2030 chero bedzi iwe uchinge wakura uye kugona kuita, iwe uchave nemikana yebasa. Ndicho chokwadi chaicho izvozvi. Kare ikako, makore 15 apfuura akange asina kufanana.
Zvatakaita ini ndakafambisa nhaurirano nevatungamiriri makumi matatu vakatenderedza tafura ndokuti, “Izvi ndizvo chaizvo. Ichi ndicho chokwadi. Isu tiri mune yakakura mamiriro ekugadzirisa. Vanhu gumi vari mukamuri iri havachazovi munzvimbo dzavari kana mabasa avo. Hatizive kuti zvinoita sei uye hatizive kuti zviri kuenda kupi, asi izvi ndizvo zvatinoziva kuti izvi zvinofanirwa kuitika kuti simba re sangano rirambe riripo, saka chokwadi chinogara chichiwina uyezve ndepano zvatiri kukubatsira. Tichakupa mhando, maturusi, kudzidzisa, kutsigirwa, zviwanikwa zvekuti kana iwe uchigara, une maturusi ezvekushandisa neramangwana, iyo nzira yakaoma zvikuru pamberi pekushanda ichi chitsva chakabatanidzwa chinhu chaicho. Uye kune vako iwe watiri kubuda, funga nezvazvo semukana. Iwe unenge uchibva nehuku. Iwe unozogona kunyorazve hupenyu hwako. Iwe unozogona kudzokorora hupenyu hwako. Iwe ungatowana mukana wekudzoka pakondirakiti. Ngatitarisei kuti mumwe nemumwe wako sei, isu tingaishongedze sei iwe, kukubatsira iwe, kukubatsira, nekukutsigira kuti ugadzire ramangwana rako rakanakisa. “
Zvino, ndinodada kukuudza iwe kuti nekuda kweizvozvo, vanhu gumi vanowana vatungamiriri vavo vanovabatsira kuti vawane mukana unotevera. Vatungamiriri vanovaroverera, vaivatsigira, vakavatungamira, uye ivo vanhu gumi vakatumira zviitiko vakataura chinhu chakanakisa chakaitika kwandiri. Ndakadzidza nzira yekufamba shanduko. Ndakadzidza kubata nezveramangwana risingazivikanwe uye pandakaperera, ndinofara kupfuura zvandaive ndakamboita, saka ini handidi kuita kurwadza kurwadziwa kwekuchinja.
Kune vatungamiriri vanoteerera, iwe unofanirwa kuve unoda kugara pasi nevanhu nguva nenguva uye nekuvaona sevanhu, ziso neziso, teerera kune izvo zvavanotya nazvo. Usadzivisa kurwadziwa. Usavanongedze kune imwe mhinduro isina mhinduro. Vabatsire kutsigirwa kuburikidza nemhando.
Batsira vanhu kuti vachinje. Isu tinoshandisa edu ehutungamiri ekuchinja emhando uye toti, iwe unofunga iwe uripi mukuchinja izvozvi? Tinokuwana sei kuti ugadzire mhinduro?
Iwe haugone kungoudza vanhu kuti hauna kunaka uye iwe unofanirwa kuchinja. Iwe haugone kungoudza vanhu, kuyamwisa, buttercup. Tiri kufamba uye tiri kuchinja zvakadaro. Iwe haugone kungoudza vanhu kuti vachinje kana kufa. Iwe unofanirwa kuve nehanya nezvekubudirira kwevanhu uye semutungamiri unofanirwa kuve unoda kukwidza masaga ako uye buruka uye wakasviba uye uine izvo zvakaoma, kutaura kwakakosha kutaura sechokwadi sezvaunogona kupihwa ruzivo kuti unobvumirwa govana uye utungamirire vanhu kwavanoenda kunovabatsira, vabatsire kuona kuti zvinovabatsira sei uye uchahwina. Vabatsire kuona kuti ramangwana rakagoverwa.
Jason: Ndinovimba vatungamiriri vese vanoteerera izvi vakatora izvo mukati. Wakagona kutora mune zvakawanda zvezvinhu izvo zvinogona kuitwa kunyatsogadzira izvi zvakanyorozeka sezvinobvira uye ndinoda kuti hwaro hwese hwatangwa muchokwadi. . Ini ndinoreva kuti chokwadi ndicho chaizvo chinofanira kubuda kuti iwe uve nehurukuro idzi dzechokwadi uye ini ndanga ndichienda kunotambanudza izvi uye apo ini ndanga ndichiteerera kune izvi, ndinonzwa seichi kazhinji chinhu chaunofanira kuisa kana zvasvika kuzvitungamira, sekuvimbika kwako iwe pachako. Iwe unogona kutiudza zvishoma zvimwe pamusoro pazvo? Pane kuti pamwe ndiri muchikamu uye ini ndingaone maitiro epo kushandurwa kwenzvimbo yangu, hunyanzvi hwangu uye hunyanzvi hwangu hwuri kuuya? Ini ndingaite sei kuzvitungamira iko, iko kuzvishingisa kuti ndione kwandinogona kudzorwa uye pane mukana here wekuti hunyanzvi hupi hwandifanirwa kutarisa mukudzidziswa zvakanyanya?
Cheryl: Kuzvitungamira zvakajeka, kuri kuchengeta rako. Kana ndichiziva kuti ramangwana rangu basa rakadzikira, iyo nhamba chinhu chandichaita kutora sekuenderana nekwaMaslow chinzvimbo uye ndiko kuedza kuzvidzivirira.
Ndicho chikonzero nei tichiona yakawanda yeCYA mumasangano uye isu tinoona yakawanda yeCYA kuvhara yako a **. Uye chikonzero chatinoona icho ndechekuti vanhu vanongoenda kumhinduro yekutya.
Zvakadai sekuti, ini handidi kutora shanduko iyi nekuti zvinoreva kuti ini ndinogona kunge ndisina basa. Zvandinotaura semuqeqeshi ndizvo, saka ngatiende ikoko. Ko kana, iwe une hunyanzvi hwei? Unounza kukosha kwakadii? Munoshandura sei hupenyu hwevanhu? Iwe unowedzera sei kukosha kune sangano? Nekuti kana iwe uine chaiyo wired yekuwedzera kukosha uye iwe uchigara uchitsvaga kubatsira vamwe vanhu kubudirira, iwe unovimbisa ramangwana basa kugadzikana, hapana mubvunzo.
Kuzvitungamira kunobva mukuzvishingisa. Iwe unotenda here kuti une kukosha?
Iwe unotenda here kuti iwe unofanirwa kugadzira kukosha kune chero munhu mune ramangwana?
Iwe unotenda here kuti ramangwana rinogovaniswa?
Uye kana iwe uine icho kuzvishingisa, nenzira, zvikwata zvako zvinokuda kupfuura zvavanoita nekuti ivo vanoona kuti hausi kuedza kuzvidzivirira. Iwe uri kunyanya kutarisisa pavari uye kubudirira kwavo kupfuura kwauri pakuchengetedza ramangwana rako rekuita uye kana iwe ukachinjisa maonero kune izvo, zviri zvishoma nezve, Ah my gosh, ini ndichave ndisiri pabasa uye zvakawanda nezve chii Ini ndoziva kuve chokwadi pane zvandinoita kuwedzera kukosha. Uye izvo kwandiri, kune chero munhu anoteerera achingogamuchira pfungwa iyoyo kune yake inotevera nhanho, iwe uchaona kuti hapana chaicho chekutya.
Pane yega rondedzero, ndanga ndiri muzvinabhizimusi kweanopfuura makore makumi maviri pamwe. Vhiki yega yega haina chokwadi. Handizive kunotevera mutengi kwaanobva. Handizive kuti inotevera mari painobvepi. Ndicho chave chokwadi changu kwemakore makumi maviri pamwe. Ini ndinotenda munhu wese anofanirwa kukudziridza kuzviitira bhizimusi mindset kwete iyi mindset yatakava nayo kwemakumi mashoma emakore epayadhi yakasimbiswa, iri goridhe rinorembera.
Izvo chaizvo. Izvo zvinotitadzisa kufunga pamusoro pezvekutsamira kwedu chinhu uye vanhu vazhinji vakagadziridzwa kutenda kuti ivo vakangofanana nekuzivikanwa kwebasa ravo ravanenge vari uye rinoda kuti rishanduke. Kuzivikanwa kunoda kuchinjira kune, isu tiri kudarika izvozvo. Isu tinounza kukosha kwakawanda kupfuura izvozvo uye kana usingatendi izvozvo, saka basa ratichafanira kuita pachedu rakatenderera kukudziridza iro kune repamusoro soro mukana
Jason: Whew. Uri kuparidza kwaya uye inonanga kumba. Isu tiri kuvhara chikamu ichi, kutaura pamusoro peichi uye pamwe chinhu chimwe chandaida kufukidza tisati tacheka izvi sezvo ini ndiri kufambisa zuva rangu rezuva rekushanda, ndinogara sei ndiri pamusoro pekuona izvo maitiro ari kuuya kuzochinja ini ndinokurumidza? Sezvinoita ndinoita sei kuti ndichengete radha kuti ndizive zvandinofanira kutarisa?
Cheryl: PaNeMMping isu tese tiri pamusoro - "Chii chinotevera?" Mubvunzo uyu unonyanya kuita nekuti isu hatisi kugadzira kunetseka nezveramangwana riri kure. Saka zvandichataura kwauri kuti urikufamba izvo maitiro zviri pamusoro pekutarisa pane zviri kukukanganisa mune rako remangwana uye zvishuwo zvako uye zvaunofarira uye zvaunoda kuita uye kubatsira. Uye wobva watarisa ziso pane izvozvo. Iwe unoziva iri ibasa redu. Saka kwandiri, ini ndinogara ndakaiswa mune mamwe ma future. Vari kuti chii? Vari kuitei? Ndakagadzirirwa tekinoroji. Ndeapi maitiro ari mune tekinoroji uye ari kuita sei nzanga?
Saka ini ndinofunga kuva neiyo future future hat paunenge uri pabasa rako razvino chinhu chimwe chaunogona kutanga kuita hono ikozvino pane kutya. Vanhu vazhinji vane misoro yavo mujecha. Ivo havade kuziva kuti zvinhu zviri kuchinja sei kana zviri kuitika. Ndiri kuti, usadaro. Simudza musoro wako kumusoro. Teerera, nekuti ndipo panowanikwa mikana yekuzviratidza.
Uye nenzira, ndipo panotangira muvambi weUber uye muvambi weAirbnb, ivo vakasimudza misoro yavo ndokuona kuti ramangwana rakagovaniswa uye vakati, iyi ndiyo nzanga iri kuenda. Vanhu vanoda mota dziri kudiwa. Ivo vanoda kuona kuti ndiani achave ari kutyaira. Ivo vanoda kuve vanokwanisa kufamba nyika uye kushandisa pekugara kwemumwe munhu. Saka kana tikasimudza musoro wedu kubva mujecha, tinoona mukana. Hapana chekutya. Chinhu chega chatinofanira kutya ndechokuzvikuvadza pachedu.
Isu tinoisa yedu yekuvhara migwagwa- yedu yekumira mabhuru uye kwandiri, ndizvo zvandaizoda kutya kuti ndipo pandiri kuzvimisa? Ndiri kuvharira kupi kugona kwangu? Ndiri kumisa mikana kupi? Nekuti kana ndisiri kutarisa kune ramangwana, zvinoreva kuti ndiri kungoda kurarama mubhuru. Ndiri kurarama mukuramba. Ndiri kurarama mukunzvenga uye ndanga ndiri kurwizi kurambwa kazhinji. Jasoni, hazvinakidze. Unotambisa nguva yakawanda uchiramba. Mubvunzo wangu wakanaka kwandiri ndewekuti: "Ndingaite sei kuti ndive mukadzi akanaka, amai vakanaka, ambuya vakanaka, shamwari yepamoyo, kukosha kwakakosha kunopa vatengi vangu?" Ini ndinongoda kuva, uye izvi zviri kusvitsa misodzi kwandiri maziso. Ini ndinoda kuve wepamusoro-soro munhu wandinogona kuve uye sekureba sekuronga kwangu, ndine zero yekutya ramangwana. Kutya kweZero.
Jason: Cheryl, ndinokutendai zvikuru nekushandisa nguva ino nesu uye nekugovana zvese izvi zvinoshamisa nzwisiso. Ini ndinofunga kuti munhu wese achange achisiyira pano aine pfungwa dzakasiyana zvachose nezve maitiro ekugadzirisa ramangwana iri rinouya kwatiri nekukurumidza uye nekukurumidza.